Boorash Oatmeal "key lime pie" quraacda ah - Thermomix Recipes | Xeerarka ThermoRecipes
Boorash boorash loogu tala galay quraacda "key lime pie"
DesayunoDaqiiqado 721Dadka 2Kalooriyeyaasha 300
Boorashka "furaha lime ee muhiimka ah" waa a cusub oo quraac buuxinaya inaad u isticmaali karto inaad subaxdii u rogto daqiiqado dhadhan buuxa leh.
Waxay leedahay macaan dhadhan lime kaas oo si aad ah isugu daraya qaab dhismeedka jilicsan ee boorashka iyo taabashada buskudka. Intaa waxaa dheer, qashinkan, waxaad ku dari doontaa wax badan oo fiber ah cuntada ku dhowaad adigoon ogeyn.
Quraacdan waa mid fudud oo xitaa kuwa yaryar ay ku sameyn karaan iyaga Toy Thermomix Adiguna waa inaad miisaamtaa maaddooyinka, isku dar oo dhowr saacadood sug kahor intaadan ku raaxaysan dhadhanka roodhida liinta.
1 Boorash boorash loogu tala galay quraacda "key lime pie"
2 Ma dooneysaa inaad wax badan ka ogaato kuwan "furaha lime keedka" boorashka oatmeal ee quraacda?
Quraac macaan oo leh dhadhan macaan
Waqtiga diyaarinta: 12H
Waqtiga karinta: 1M
Wadarta waqtiga: 12H 1M
100g liin Giriig yogurt
Faafin 40 g
10 g sharoobada agave
1 qaado (cabbirka qaxwada) isku dhaji vanilj macmal ah (fiiri cuntada)
1 liin (zest + juice)
10 g chia abuurka
65 g oo ah miro la duubay oo aan lahayn gluten
2 buskud dheef-shiid kiimikaad lahayn
Gali yogurt, caano, jiis faafay, sharoobada agave, dhalada vanilj iyo 2 qaado oo casiirka lime ah galaaska. Si wanaagsan ayaan isugu qasnaa inta lagu jiro 30 ilbiriqsi, xawaare 2. Ilaa isku dar isku mid ah laga gaarayo.
Ku dar jajabka oat, abuurka chia iyo liin dhanaanta. Waxaan walaaqnaa inta lagu jiro 30 ilbiriqsi, xawaare 2, leexasho bidix.
Waxaan u qaybinaa waxyaabaha ku jira weelasha aan u adeegi doonno oo aan u oggolaanno ugu yaraan 4 saacadood. In kasta oo ay ugu fiican tahay in laga tago habeen.
Waqtiga u adeegida, waxaan ku burburin doonnaa cookies-ka farahaaga oo waxaan ku rushaynnaa jajabyada dusha sare ee boorashka. Waxaan isla markiiba u adeegnaa si buskudku uusan u noqon mid jilicsan oo lumiya maqaarkiisa jilicsan.
Ma dooneysaa inaad wax badan ka ogaato kuwan "furaha lime keedka" boorashka oatmeal ee quraacda?
Isbaanishka, boorashku wuxuu ahaa quraac aad u hooseeya oo caan ah, laakiin marba marka ka dambeysa waxay u baneeyeen quraacda kale. Si kastaba ha noqotee meelo badan Boorashka weli waa la cunaa quraac ahaan maalin kasta.
Mana aha wax lala yaabo maxaa yeelay waxaa ka buuxa tamar iyo dhereg taas oo ku habboon la kulan dhammaan howlaha subaxda gaajo la'aan.
Waqti hore ayaan diyaarinay boorash leh dhadhan tufaax ah in kastoo, munaasabaddaas, waxay ahayd inaan diirrinno diyaarinta. Nooca maanta ayaa ka fudud maxaa yeelay kaliya isku qasida oo u ogolaata inay nasato ayaa ku filan in lagu raaxeysto dhadhankeeda.
Noocani si fiican ayaa loo samayn karaa Laaktoos la'aan maxaa yeelay maanta waxaa ku yaal yogurt, caano iyo farmaajo faafin kara suuqa oo ku habboon dulqaadkan.
Sidoo kale waa quraac gluten bilaash ah in baruurta ay cabi karaan. Waxay kaliya u baahan yihiin inay xaqiijiyaan in maaddooyinka ay ku habboon yihiin iyo, wixii ka sarreeya, in miraha la aqoonsan yahay si looga fogaado cabsida iyo dhibaatooyinka.
Inaan ku siiyo a taabasho cufan waxaan isticmaaleynaa cookies. Waxa caadiga ah waa inay yihiin nooca dheefshiidka laakiin, runtii, waad isticmaali kartaa midka aad ugu jeceshahay ama kuwa aad gacanta ku haysato. Iyo, dabcan, inay ku habboon yihiin cuntadaada.
Waad laba jibaari kartaa waxyaalaha ku jira isla cuntadan iyo samee dhowr maalmood in kastoo ay kuxirantahay booska aad kuhesho qaboojiyaha. Waxay ku habboon tahay maalmahaas markaad ogtahay in ilbiriqsi kasta la tiriyo.
Intaanan dhamaysan ... war wanaagsan !! Haddii aad jeclaatay quraacdan aadka u weyn, waxaad awoodi doontaa inaad ku raaxeysato dhadhankeeda sidoo kale inta lagu jiro subaxda ugu qabow. Kaliya waa inaad kululeeysaa inta u dhexeysa 30 iyo 60 ilbidhiqsi microwave-ka waxaadna diyaar u ahaan doontaa inaad cabto xilliga qaboobaha oo dhan.
Macluumaad dheeraad ah - Boorash boorash leh tufaax iyo qorfe / Jinka vaniljiga ee guriga lagu sameeyo
Soo ogow cuntooyinka kale: Cunto caafimaad leh, Si fudud, Postres
Wadada buuxda ee maqaalka: Heerkulbeegyada » General » Si fudud » Boorash boorash loogu tala galay quraacda "key lime pie"
Haa, waxaa jira boorash ay ku jiraan waxyaabo yar laakiin aan ku jirin dhadhankan macaan… adigu dooro !! 😉
Keeg shinni ah oo lagu sameeyo miro guduud ah